Ngawaphi amacebiso ezokhuseleko anokunikwa ababuki zindwendwe ngeendawo zabo zokuhlala? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Eyababuki zindwendwe – isihloko soncedo
Ngawaphi amacebiso ezokhuseleko anokunikwa ababuki zindwendwe ngeendawo zabo zokuhlala?
Ukuba ngumbuki zindwendwe kwindawo yokuhlala kuza nemithwalo ethile. Nazi izixhobo zokukukunceda njengoko uqhubeka.
Sebenzisana kakuhle nabanye
Bhala imithetho yekhaya lakho kunye nencwadi ebaxelela ngendlu
Qinisekisa ukuba unayo i-inshorensi
Beka izinto ezifunekayo kwindlu yakho
Funda amanqaku ka-Airbnb Okubuka Iindwendwe Ngenkathalo
Soloko ubhatala kwaye unxibelelana ngo-Airbnb. Sebenzisa inkqubo yokuthumela imiyalezo ka-Airbnb ukuze wazane neendwendwe zakho uze uzichazele ngoko zimele zikulindele kuhambo okanye kwindawo yakho.
Funda iprofayile nezimvo zabo basenokuba zindwendwe zakho, uze ukhangele iinombolo zefowuni eziqinisekisiweyo, iiakhawunti zeewebhsayithi zokuncokola ezikonektiweyo nokuncomelwa. Ukuba abantu abasenokuba zindwendwe zakho abanazo iiprofayile eziqinisekisiweyo, ungazicela ukuba zizifake.
Yithembe indlela oziva ngayo: Ukuba akukuthembanga ukubhukisha, sukukwamkela.
Xa ubhala imithetho yekhaya lakho kunye nencwadi ezixelela ngendlu kunceda iindwendwe zazi ukuba zilindele ntoni. Faka nantoni na ongathanda ukuba abantu bayazi ngaphambi kokuba babhukishe—ngokomzekelo, chaza ukuba kuvumelekile na (okanye apho kuvumeleke khona) ukutshaya, nokuba zikhona na iindawo ezithile abangenakungena kuzo, iphasiwedi ye-wifi yakho, okanye ukuba iindwendwe kufuneka zikhulule izihlangu ngaphambi kokuba zingene.
Ukuba intlekele ichaphazela ingingqi yakho ibe ungathanda ukuncedisa ngokwamkela abantu abadinga indawo ngexesha longxamiseko ungafaka indawo yakho simahla.
Inkqubo Ye-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe yakwa-Airbnb inikezela ngokhuseleko lomonakalo ofikelela kwi$1 000 000 yeedola zaseMerika sihlandlo ngasinye kwimeko apho umntu efaka ibango lokwenzakala emzimbeni okanye lokonakala kwendlu okunento yokwenza nokuhlala endaweni yakwa-Airbnb.
Mhlawumbi ungacinga nangokuthetha nenkampani yakho yeinshorensi ngokongenza ukhuseleko lwakhongeinshorensi yomntu oqeshileyo okanye eyomnikazi wendawo.
Ungacela iindwendwe ukuba ziqinisekise iinkcukacha ezithile ngaphambi kokuba zibhukishe, ezifana Nokuqinisekiswa ukuba zizo .
Ukufaka idiphozithi kwindlu yakho kunokukunceda ukhuseleke naxa kusenzeka ingozi, njengokuchitheka kwewayini emethini.
Sikhuthaza ababuki zindwendwe ukuba bacinge kakuhle ngezinto abamele bazenze. Ukwamkela iindwendwe kukunika amathuba okwenza izinto ezanelisayo kodwa kukho nokuzibophelela okuthile okufunekayo. Senze amanqaku okubuka iindwendwe ngenkathalo anokukunceda uqalise ukufunda ukuba kuthetha ukuthini ukubuka iindwendwe kwingingqi yakho.
Khumbula: Kwimeko yongxamiseko, okanye ukuba usemngciphekweni wokwenzakala, qhakamshelana namapolisa asekuhlaleni okanye iinkonzo zongxamiseko ngoko nangoko.
Ndingayifaka okanye ndiyilungise njani imithetho yam yendlu?
Ukubuka iindwendwe kwiindawo zokuhlala
Yintoni isiqinisekiso kuBabuki Zindwendwe Be-Airbnb?
Isebenza njani i-Inshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo Nesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo sika-Airbnb?
Ngaba ukulungele ukuqalisa ukwamkela iindwendwe?
Thatha inyathelo elilandelayo lokwenza imali engakumbi ngekhaya lakho.